एफबीआई आदेशको बिरूद्ध अमेरिकी कांग्रेसमा एप्पलको बयान | म म्याकबाट हुँ
एफबीआई आदेशको बिरूद्ध अमेरिकी कांग्रेसमा एप्पलको बयान
आज, एप्पल जनरल परामर्शदाता ब्रुस सेवेल हाउस न्यायिक समितिको समक्ष पेश हुनेछ। अदालतको आदेशको वरिपरि छलफल हुनेछ जुन एप्पललाई "पछाडिको ढोका" संग आईओएसको संस्करण सिर्जना गर्न बाध्य पार्छ जसले एफबीआईलाई कथित आतंकवादी फारुकको आईफोन पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ। विगतमा एफबीआईको अडानका कट्टर समर्थक रहेका साइरस भान्स, म्यानहट्टन जिल्ला अधिवक्ता र कंग्रेसमा रहेका धेरै प्रतिनिधिहरू लगायत स a्कोचित भीडको अगाडि सेवेल देखा पर्नेछ। यहाँ पूर्ण उद्घाटन भाषण छ जुन सेवेलले वितरण गर्ने छ र जुन द्वारा प्रकाशित गरिएको हो विगार्नुहोस्।
«धन्यवाद, श्रीमान् राष्ट्रपति। एप्पलको तर्फबाट आज समितिको समक्ष पेश हुन पाउँदा मलाई खुशी लाग्छ। हामी तपाईंको निमन्त्रणा र हाम्रो देशको आधारभूत नागरिक स्वतन्त्रतामा केन्द्रित यस महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको छलफलको हिस्सा हुने अवसरको लागि कदर गर्दछौं।
म सुरुबाट नै भनेको कुरालाई दोहोर्याउन चाहन्छु - कि सान बर्नार्डिनो आक्रमणका पीडित परिवार र परिवारले गहिरो संवेदना पाएका छन र हामी न्यायसंगत हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा पूर्ण सहमत छौँ। एप्पललाई आतंकवादीप्रति कुनै सहानुभूति छैन।
हामीसँग कानून प्रवर्तनको लागि अत्यन्त सम्मान छ र एक सुरक्षित विश्व सिर्जना गर्ने यसको लक्ष्य साझा गर्दछ। हामीसँग समर्पित पेशेवरहरूको टोली छ दिनको २ hours घण्टा, हप्ताको सात दिन, वर्षको 24 assist365 दिन कानून प्रवर्तनमा सहयोग पुर्‍याउन। जब एफबीआई हामीलाई सान बर्नार्डिनो हमलाको तत्काल पछि आए, हामीले उनीहरूको अनुसन्धानमा लिंक गरेका सबै जानकारी दियौं। र हामी एप्पल ईन्जिनियरहरूलाई उपलब्ध गराई धेरै थप अनुसन्धान विकल्पहरूको सल्लाह दिनको लागि अतिरिक्त माईलमा गयौं।
तर अब हामी आफैंलाई एउटा असाधारण परिस्थितिको केन्द्रमा पाउँछौं। एफबीआईले अदालतलाई उनीहरूलाई केहि चीज दिन भन्यो जुन हामीसँग छैन। एक अपरेटि system प्रणाली सिर्जना गर्नुहोस् जुन अवस्थित छैन, किनकि यो अति खतरनाक हुनेछ। तिनीहरू आईफोनमा ब्याकडोरको लागि सोधिरहेका छन् विशेष रूपमा सफ्टवेयर उपकरण निर्माण गर्न जुन एन्क्रिप्शन प्रणाली भंग गर्न सक्दछ जुन सबै आईफोनमा व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित गर्दछ।
जस्तो कि हामीले तपाईंलाई भनेको थियौं, र हामीले अमेरिकी जनतालाई भनेझैं त्यो सफ्टवेयर उपकरण निर्माण गर्दा आईफोनलाई असर गर्दैन। यसले ती सबैको सुरक्षालाई कमजोर पार्दछ। वास्तवमा, गत हप्ता निर्देशक कमे सहमत भए कि एफबीआई सम्भवतः यस उदाहरणलाई अन्य फोनहरूसँग सम्बन्धित अवस्थामा प्रयोग गर्दछ। अभियोजक भान्सले भनेका छन कि उनले यो १ 175 भन्दा बढी फोनमा प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छन्। हामी सबै सहमत छौं कि यो एकल आईफोनको पहुँचको बारेमा होईन।
एफबीआईले एप्पललाई हाम्रा उत्पादनहरूको सुरक्षा कमजोर पार्न आग्रह गरिरहेको छ। ह्याकर्स र साइबर अपराधीहरूले यसलाई हाम्रो गोपनीयता र व्यक्तिगत सुरक्षामा कहर गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्। यसले आफ्नो नागरिकको गोपनीयता र सुरक्षामा सरकारी हस्तक्षेपको लागि खतरनाक मिसाल सेट गर्दछ।
सयौं लाख कानून-कानून पालन गर्ने व्यक्तिहरूले एप्पल उत्पादनहरूलाई उनीहरूको दैनिक जीवनको सब भन्दा गहिरो विवरणको लागि विश्वास गर्दछन् - फोटो, निजी कुराकानी, स्वास्थ्य डेटा, वित्तीय खाता, र प्रयोगकर्ताको स्थानको बारेमा जानकारी, साथ साथै तपाईंको साथीहरू र परिवारको स्थान। तपाईं कसैको पाकेटमा अहिले आईफोन हुनसक्दछ, र यदि तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने, त्यहाँ बताइएको आईफोनमा चोरले तपाईंको घरभित्र पसेर चोर्न सक्ने भन्दा बढी जानकारी राखिएको हुन्छ। तपाईको डेटा सुरक्षित राख्नका लागि हामीलाई थाहा रहेको एकमात्र तरीका भनेको कडा ईन्क्रिप्शन हो।
हरेक दिन, एक ट्रिलियन भन्दा बढी लेनदेन ईन्क्रिप्टेड संचारको परिणामको रूपमा ईन्टरनेटमा सुरक्षित रूपमा हुन्छ। यी अनलाइन बैंकिंग र क्रेडिट कार्ड लेनदेन देखि स्वास्थ्य रेकर्ड, आदान प्रदान गर्न को लागी राम्रो दुनिया को परिवर्तन हुनेछ, र प्रियजनहरु बीच संचार। संयुक्त राज्य सरकारले खुला टेक्नोलोजी कोष र अन्य कार्यक्रमहरू मार्फत क्राइप्टो क्रिप्टो कोष गर्न लाखौं डलर खर्च गरेको छ। राष्ट्रपति ओबामाले बोकेका कम्यूनिकेशन्स टेक्नोलोजी र इंटेलिजेंस रिभ्यु ग्रुपले संयुक्त राज्य सरकारलाई वाणिज्य सफ्टवेयरलाई जोखिममा नपार्न, कमजोर पार्ने, कमजोर तुल्याउने वा उपलब्ध नभएको पूर्ण समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ।
ईन्क्रिप्शन राम्रो चीज हो, आवश्यक चीज हो। हामी यसलाई एक दशक भन्दा बढी हाम्रा उत्पादनहरूमा प्रयोग गर्दै आएका छौं। हाम्रो ग्राहक डेटामा आक्रमणहरू परिष्कृत हुँदै जाँदा, हामीले तिनीहरूको बिरूद्ध रक्षा गर्न प्रयोग गर्ने उपकरणहरू अझ बलियो हुनुपर्दछ। कमजोर ईन्क्रिप्शनले केवल उपभोक्ताहरू र अन्य राम्रा अर्थ प्रयोगकर्ताहरूलाई हानी गर्दछ जसले एप्पल जस्ता कम्पनीहरूमा निर्भर गर्दछ उनीहरूको व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षा गर्न।
आजको सुनुवाई अमेरिकनहरु को लागी सन्तुलन सुरक्षा र गोपनीयता शीर्षक हो। हामी विश्वास गर्छौं कि हामी दुबै गर्न सक्छौं, र हुनु पर्छ। एन्क्रिप्शन र अन्य विधिहरूमार्फत हाम्रो डाटा सुरक्षित गर्नाले हाम्रो गोपनीयता सुरक्षित गर्दछ र मानिसहरूलाई सुरक्षा दिन्छ।
अमेरिकी जनता वर्तमान एफबीआई मुद्दाले उत्पन्न हुने महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको वरिपरि इमान्दार कुराकानीको लागि योग्य छन्:
के हामी साइबर आक्रमणहरू बढ्दो परिष्कृत भइरहेको तथ्यको बाबजुद पनि हाम्रो डेटा, र त्यसैले हाम्रो गोपनीयता र सुरक्षालाई सुरक्षित गर्ने प्रविधिमा सीमा राख्न चाहन्छौं? के एफबीआई लाई एप्पल, वा कुनै अन्य कम्पनीलाई रोक्नको लागी अमेरिकी जनतालाई सबैभन्दा सुरक्षित उत्पादन बनाउन मिल्छ?
यस अवस्थामा, के एफबीआईसँग कुनै कम्पनीलाई उनीहरूले नजान्ने उत्पादन उत्पादन गर्न बाध्य पार्ने अधिकार छ, सटीक एफबीआई विशिष्टता र एफबीआई प्रयोगको लागि?
हामी विश्वास गर्दछौं कि यी सबै मुद्दाहरू स्वस्थ छलफलको योग्य छन्, र कुनै पनि निर्णय तथ्यहरूको होशियारी र इमान्दारपूर्वक विचार गरेपछि हुनुपर्दछ।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईं र तपाईंको सहकर्मीहरूले जनताको प्रतिनिधिको रूपमा निर्णय गर्नुपर्दछ, २२० वर्ष पुरानो कानूनमा आधारित अदालतको आदेशको लागि अनुरोधको माध्यमबाट।
एप्पलमा, हामी यो कुराकानी गर्न तयार छौं। हामीले सुनेका प्रतिक्रिया र समर्थनले हामीलाई भन्छ कि अमेरिकी मानिसहरू पनि तयार छन्।
हामी दृढ विश्वास गर्दछौं कि हाम्रा ग्राहकहरू, तिनीहरूका परिवारहरू, उनीहरूका साथीहरू र छिमेकीहरू चोरहरू र आतंककारीहरूबाट अझ सुरक्षित हुनेछन् यदि हामी तिनीहरूको डाटाको लागि उत्तम सुरक्षा प्रस्ताव गर्न सक्छौं। र उही समयमा, स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता जुन हामी सबैले मूल्यवान गर्छ अधिक सुरक्षित हुनेछ।
तपाईको समयको लागि धन्यवाद। म तपाईको प्रश्नहरुको उत्तर दिन को लागी منتظر छु"।
तपाईं यस विषयको पूर्ण कभरेज अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ जुन हामी यहाँ एप्पलिलिजाडोसमा गरिरहेका छौं।
स्रोत | कगार
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » एफबीआई आदेशको बिरूद्ध अमेरिकी कांग्रेसमा एप्पलको बयान
एप्पलले ओएस एक्स १०.११..5 बिटा Develop विकासकर्ताहरूको लागि जारी गर्दछ
यो एप्पल स्टोरमा खडा गर्न फ्ल्यागशिपहरूको साथ सामसु'sको शर्त हो